Maalinta xoriyada Xeebta Soomaaliyeed - Wikipedia
Maalinta xoriyada Xeebta Soomaaliyeed
(Waxaa laga soo toosiyay Maalinta xoriyada somaliland)
Maalinta xoriyada Xeebta Soomaaliyeed waa maalinta loo aqoonsan yahay Maalintii Qaranimada Soomaalilaan ee ay shacabkeedu u dabaal degaan Xurriyadii ay kala soo noqdeen dawladda Soomaaliya inteeda kale oo fool habawday (lala ambaday) sanadkii 1960-kii, wakhtigaas oo xurriyada ay Gobolada SL ka qaateen Ingiriiska
TaariikhMaalinta Xoriyada Somaliland waa mid ka mid ah Maalmaha sida weyn looga xuso guud ahaan Somaliland iyo wadamada dibadaha ee ay joogaan jaaliyada dadka reer Somaliland u dhashay, iyada oo ay maalntani ku suntan tahay maalinta qaranimada Somaliland, waxaana ay ku timid ka dib dedaal badan iyo hiigsi badan oo loo maray horumarinta wadanka ayaa sanadkii 1991-kii shirweyne ay beelaha Somaliland ku qabsadeen magaalo madaxda labaad ee Burco waxa ay ku go'aansadeen in ay Somaliland noqoto qaran madax banaan oo ay xoriyadeedii luntay 1960-kii oo ay la midoobeen Somalia inteeda kale ay dib ula soo nqodaan, waxaana go'aankaasi saxeexay golihii dhexe ee Ururkii SNM (Somali National Movement), iyada oo ay halkaasi ku luntay rajadii ay dadka reer Somaliland wakhtiga badan ku taamayeen oo ahayd in la helo Shan Somaliyeed oo noqda wadan kaliya.[wax ka badal | wax ka badal xogta]
In ka badan 10 sano oo halgan hubaysan oo ay hogaaminayeen xoogagii jabhaddii SNM ka dib, waxay waxgaradka, siyaasiyiinta, aqoonyahanka iyo hormuudka qabaa’ilka iyo bulshada Somaliland ku heshiiyeen 18-kii May 1991-kii in ay la soo noqdaan xorriyadii luntay 26kii June 1960.
18ka May waa maalin ku suntan taariikhda Somaliland. Waa maalin jiilashii hore u ah xusuus, jiilasha danbena dhiirigelin iyo rajo. Waa maalin ay ka badbaaday Somaliland inay
ku dhacdo god madow. Waa maalin mudan in dib loo xasuusto taariikhdii madoobayd ee halgankii, rafaadkii, barakacii, iyo baa’bii ku dhacay bulshada Somaliland. Waa maalin mudan in la xasuusto kumanyaalkii halyey ee u duurgalay inay dulliga ka dulqaadaan shacabkooda. Waa maalin mudan in loo duceeyo intii ku geeriyootay halgankii dheeraa ee dalka loo soo maray. 18May waa maalin mudan in laga farxiyo agoontii iyo dumarkii ay ka tageen halgameyaashaasi. Ma soo koobi karno qiimaha ay maalintani ugu fadhido qarankan iyo muhiimada ay leedahay.
Somaliland waxay leedahay laba taariikhood. Taariikhdii ka horeysay 1991kii dibna ugu noqonaysa ilaa wakhtigii xornimada laga qaatay gumaystihii Ingiriiska 26kii Juun 1960. Taariikhda labaad ee Somaliland ayaa ah tan hadda socota kana soo bilaabaysa wakhtigii dib loola soo noqday xorriyadii luntay 1960kii.
Wakhti badan ku lumin inaynu ka sheekayno duruufihii hore iyo wixii ka horeeyay 1991kii, balse waxaynu is dultaagi doonaa xaaladihii kala duwanaa ee ay Somaliland soo martay tan iyo 1991kii.
Somaliland waxa lagaga dhawaaqay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco 18kii May 1991kii. Waxa Burco iskugu yimi oo go’aankanna wada qaatay dhamaan beelaha Somaliland oo ay ku jiraan kuwii aan ka qayb qaadan halgankii dib loogu soo xoreeyay Somaliland. Shirweynahan Somaliland lagu guddoonsaday wuxuu sidoo kale noqday kii ay beelaha Somaliland si rasmi u iskugu saamaxeen isla markaana iskula qaateen in loo wada midoobo sidii Somaliland looga midha dhalin lahaa. SHirkan waxa hormood u ahaa oo hagayay xubnihii Jabhaddii SNM, iyo golihii guurtida. Waxa iyaguna lagu casuumay oo door muhiim ah ku lahaa madaxdhaqameedkii beelaha darafyada ee Somaliland, iyo siyaasiyiinytii aan SNMta ku jirin.
Ilaahay naxariistii Janno haka waraabiyee waxa wakhtigaa ahaa gudoomiyihii SNM marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali, waxaana ku xigeen u ahaa Xassan Ciise Jaamac oo isagu haatan nool. Waxaynu wax ka soo qaadan doonaa khubdadii ay shirkaa ka jeediyeen Marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Ilaahay ha u naxariistee marxuum Ibrahim Maygaag Samatar oo wakhtigaa ahaa guddoomiyihii golaha dhexe ee SNM.
Barnaamijkan oo noqon mid taxane ah oo aanu kaga qayb galayno xuska 18ka May waxa uu si taaxane ah ugu soo bixi doonaa wargeyska FOORE. Waxaynu barnaamijkan kaga sheekayn doonaa marxaladihii kala duwanaa ee dhinacyada nabadgelyada, dibuheshiisiinta, dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo dhinacyada horumarka ee ay Somaliland soo martay. Waxaynu sidoo ku soo qaadan doonaa hadaladii dhaxalgalka ahaa ee haldoorka Somaliland qaar ka mid ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maalinta_xoriyada_Xeebta_Soomaaliyeed&oldid=197597"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Diseembar 2019, marka ee eheed 01:45.